အပြာဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာ မော်ဒယ် နေခြည်က အမျိုးသားတွေအတွက် Group ထောင်ပေးမယ်လို့ ကြေငြာ – Cele Cele Hot
မြန်မာနိုင်ငံအတွကင်း အွန်လိုင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အပြာရုပ်သံဇတ်လမ်းများစွာရိုက်ကူးအောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ် နေခြည်က သူမရဲ့ ပုရိသ ပရိသတ်များကို Viber,Whatapp,Messenger group အသစ်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ယခင်ထက် ကျပ်တစ်သောင်းဈေးမြင့်တက်သွားပြီဟုကြေငြာလိုက်သည်။
မြန်မာအပြာမင်းသမီး နေခြည်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် ပေ့ Costume Model Nay Chi စာမျက်နှာမှာ နေခြည် ၃လပိုင်း ၁ရက်နေ့မှာ Group အသစ်စပါမယ် . ဒီတစ်ခါ Group က အချိန်တစ်လပါ ။ညတိုင်း ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအတွင်း ဗီဒီယို တစ်ခုတင်သွားပါမယ် ။
အခန်းဆက်လေးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းအောင်တင်သွားပါမယ်။၀င်ကြေးကို လေးသောင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။
အဆိုပါ Group များကို ၀င်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ နေခြည်ဆီကို ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ၀င်ရောက်လိုကြောင်းပြောဆိုပြီး Wave money နဲ့ လေးသောင်းကျပ်လွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။
ဇတ်လမ်းတွဲများရိုက်ကူးရာတွင် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်သူများမှာ မျက်နှာကို ဖျက်ထားပြီးသရုပ်ဆောင်ထားသည်။လက်ရှိထင်ရှားသော ဇတ်လမ်းများမှာ ကျောင်းသားတစ်ဦးကို စာသင်ပေးသည့် Guide ဆရာမ၊ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ ၀န်ထမ်းမလေးဇတ်ကားများမှာ လူသိများသည်။ သူမအနေနဲ့ အပြာဇတ်ကားများဆက်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူမကို အားပေးကြဖို့ အမျိုးသားတွေကို တိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါ ၆၆(ဃ) ဆိုတဲ့ Online နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဥပဒေကို နားရွက် တံတွေးဆွတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်. ..ခုလို လိင်ကိစ္စကို facebook မှာ Page ထောင်ပြီး ဖောက်သည်ရှာနေတာဟာ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပြီး ဘယ်လို စုံစမ်းအရေးယူမလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး
မွနျမာနိုငျငံအတှကငျး အှနျလိုငျးမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ အပွာရုပျသံဇတျလမျးမြားစှာရိုကျကူးအောငျမွငျနတေဲ့ မွနျမာမျောဒယျ နခွေညျက သူမရဲ့ ပုရိသ ပရိသတျမြားကို Viber,Whatapp,Messenger group အသဈပွုလုပျမညျဖွဈပွီး ယခငျထကျ ကပျြတဈသောငျးဈေးမွငျ့တကျသှားပွီဟုကွငွောလိုကျသညျ။
မွနျမာအပွာမငျးသမီး နခွေညျက သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ ပေ့ Costume Model Nay Chi စာမကျြနှာမှာ နခွေညျ ၃လပိုငျး ၁ရကျနမှေ့ာ Group အသဈစပါမယျ . ဒီတဈခါ Group က အခြိနျတဈလပါ ။ညတိုငျး ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအတှငျး ဗီဒီယို တဈခုတငျသှားပါမယျ ။
အခနျးဆကျလေးနဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးအောငျတငျသှားပါမယျ။ဝငျကွေးကို လေးသောငျးသတျမှတျထားပါတယျလို့ ကွငွောထားပါတယျ။
အဆိုပါ Group မြားကို ဝငျရောကျလိုသူတှအေနနေဲ့ နခွေညျဆီကို ဖုနျးနဲ့ဆကျသှယျပွီး ဝငျရောကျလိုကွောငျးပွောဆိုပွီး Wave money နဲ့ လေးသောငျးကပျြလှဲပေးရမှာဖွဈပါတယျလို့ ကွငွောထားပါတယျ။
ဇတျလမျးတှဲမြားရိုကျကူးရာတှငျ တှဲဖကျသရုပျဆောငျသူမြားမှာ မကျြနှာကို ဖကျြထားပွီးသရုပျဆောငျထားသညျ။လကျရှိထငျရှားသော ဇတျလမျးမြားမှာ ကြောငျးသားတဈဦးကို စာသငျပေးသညျ့ Guide ဆရာမ၊ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျနဲ့ ဝနျထမျးမလေးဇတျကားမြားမှာ လူသိမြားသညျ။ သူမအနနေဲ့ အပွာဇတျကားမြားဆကျရိုကျသှားမှာဖွဈပွီး သူမကို အားပေးကွဖို့ အမြိုးသားတှကေို တိုကျတှနျးထားကွောငျးသိရပါတယျ။
ပင်စင်ယူရမယ့် အသက်ထက် (၃) နှစ်ကျော် ပိုပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာမ၊ လျော်ကြေးငွေ ၇၈ သိန်းပြန်ပေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေ →